शिक्षकको विषय संसदमा, दरबन्दीमा आर्थिक चलखेलको आरोप ! | EduKhabar
शिक्षकको विषय संसदमा, दरबन्दीमा आर्थिक चलखेलको आरोप !
काठमाडौं - आर्थिक चलखेल र प्रलोभनमा शिक्षक दरबन्दी बाँडफाँट गरिएको भन्दै सांसद राजकिशोर यादवले आपत्ति जनाएका छन् । आईतबार बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै यादवले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्ने तर ब्यवहारमा त्यस्तो नभएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनता पार्टिका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य समेत रहेका यादवले आफ्नो गृह जिल्लामा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको आवश्यकता नहेरी मनलाग्दी तरिकाले शिक्षक दरबन्दी वितरण गरिएको आरोप लगाए ।
'सिराहा जिल्लाको शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी बाँड्दा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको आवश्यकता नहेरी आर्थिक चलखेल, प्रलोभनमा परेर दरबन्दी बाँटफाँट गरेको छ' संसद बैठकमा उनले भने 'तत् सम्बन्धि जिल्लाका सम्पूर्ण शिक्षासँग सरोकार राख्ने संघ संगठनले प्रदेश र केन्द्रमा निवेदन दिएको छ ।'
यस्तो कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रको संरक्षण रहेको समेत उनको आरोप छ ।
'जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला छाडेर केन्द्रमा नेताको घर शक्ति केन्द्रहरुको घर चाहर्दै हिडेको स्थिती छ, त्यो शिक्षा अधिकारी अख्तियारमा मुद्धा खेपिरहेको स्थिती छ' संसद बैठकमा यादवले भने ।
संसदमा बोल्ने क्रममा यादवले व्यक्तिको नाम भने लिएनन् । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शिक्षा समन्वय इकाईका रुपमा राखिए पनि यादवले बोल्ने क्रममा 'जिल्ला शिक्षा अधिकारी' सम्बोधन गरेका थिए । यस अघि सुनसरीको उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेका पिताम्बर गौतम शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ९ गते गरेको सरुवामा सिराहको इकाई प्रमुखका रुपमा सरुवा भएका छन् ।
सांसद यादवले अनियमित दरबन्दी तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आयोग निर्माण गरेर दरबन्दी वितरणमा भएको अनियमतिता बाहिर ल्याउन सभामुख मार्फत् सरकारसँग माग गरेका छन् । दरबन्दी बाँडफाँट गर्ने आधार अनुसार दरबन्दीको काम अघि बढाउन पनि उनको माग छ ।
संसदमा बोलेपछि एडुखबरसँगको कुराकानीमा यादवले दरबन्दीको मनलाग्दी वितरणमा महेन्द्र महतो संलग्न भएको बताए । पछिल्लो पटकको सरुवामा महतो शिक्षा विभागको फाजिलमा तानिएका छन् ।
यसैविच गणतान्त्रिक शिक्षक फोरम सिराहका अध्यक्ष सत्रुघ्न यादवले महतोले जिल्लामा पुलका रुपमा प्राप्त राहत दरबन्दी बेचेको आरोप लगाए ।
'जिल्लाका १ सय १९ प्रावि कोटाको राहत दरबन्दीलाई महातोले विना प्रकृया मनलाग्दो गरी बेचेका हुन्' उनले भने, 'एकलौटि निर्णय गराएर उनले चलखेल गरेकाले हामीले विरोध गर्दै आईरहेका छौं ।'
प्रकाशित मिति २०७५ जेष्ठ २७ ,आईतवार